ကုလ၀န်ထမ်း (၃) ဦး မြန်မာအာဏာပိုင်က တရားစွဲဆို
ကုလ၀န်ထမ်း (၃) ဦး မြန်မာအာဏာပိုင်က တရားစွဲဆို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေအတွင်း အထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ၀န်ထမ်း (၁၀) ယောက်ထဲက အနည်းဆုံး (၃) ယောက်ကို မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေက တရားစွဲဆိုလိုက်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက မနေ့က ပြောလိုက်ပါတယ်။
တရားစွဲဆိုခံရသူ (၃) ယောက်လုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်ကြပြီး ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) ရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကို ဘာပြစ်မှုနဲ့ တရားစွဲတာလည်း ဆိုတာကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးဘူးလို့ (UNHCR) ရဲ့ ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီး Melissa Fleming က ပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး Mr. Antonio Guterres ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ UNHCR ၀န်ထမ်းတွေကို ဘာပြစ်မှုနဲ့ ထိန်းသိမ်းခဲ့သလဲဆိုတာ သိရဖို့ ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ ပန်ကြားခဲ့ပေမဲ့ အခုထိ အကြောင်း မထူးသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ကျန်တဲ့ ထိန်းသိမ်းခံ ကုလသမဂ္ဂ ၀န်ထမ်းတွေထဲမှာ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ FAO ၀န်ထမ်း (၃) ယောက်နဲ့ နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ MDF က ၀န်ထမ်း (၄) ယောက် ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုလည်း တရားစွဲဆို ထားသလားဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။
If anyone who is UN staff made mistakes and broken urles and regulations,it will be catched and inspected by goverment.
Never take cover by Human rights.
a)khin maung thay (mum
This is very sad story. How goverenmet is voilating human right without caring UNHCR. I wonder why international communities is still watch and silent. They must take strong pressure to government, then they will be care UNHCR STAFF and will respect human right.
Jul 14, 2012 03:49 PM
Koung Nyunt Ran Daing
I think You, RFA (Esp. BBC ,VOA) have known .If not, U can easily inquire it from Maung Daw and Bangladesh . You,if Buddhist, why so much do you try to quit the truth."The worst evil is the Lie."Buddha said. Jul 14, 2012 11:46 AM